Kujabhe abaningi engaphumeleli uMengameli Zuma kwinkomfa eseThekwini | News24
Kujabhe abaningi engaphumeleli uMengameli Zuma kwinkomfa eseThekwini
Durban – Kwehle iziqhomo kulabo abebethamele inkomfa iWorld News Media Congress yalo nyaka ebanjelwe eNkosi Albert Luthuli Convention Centre ngesikhathi betshelwa ukuthi uMengameli Jacob Zuma ngeke esaphumelela.
Lokhu yingoba kuthe sekusondele isikhathi somcimbi wokwamukelwa kwezithameli, zezwakala emaphasishi zithi zikubheke ngabomvu ukubona uMengameli 'ngo si'.
Izindaba zokuthi uMengameli Zuma ngeke asaba yingxenye yale nkomfa zibhadlazwe yilowo onguMengameli weWorld Association of Newspapers and News Publishers uThomas Brunegard othe uZuma uvaleleke eKapa njengoba kunesiphepho.
“Ngeshwa uMengameli Zuma ngeke asakwazi ukuba asamukele, umyalezo siwuthola manje nje ukuthi ngeke asakwazi ukuzosamukela ngenxa yesimo sezulu esingesihle eKapa. Siyethemba ukuthi uzokwazi ukuza kulezi zinsuku ezimbili ezizayo. Kodwa ngebhadi, akezi namhlanje,” usho kanjalo, kuzwakala izethameli ziquma.
Uqhubeke wathi ingqikithi yale nkomfa ukuthi abakulo mkhakha wezindaba bacijane ezintweni eziningi.
“Kuhle ukuthi sihlangane kanje sakhane ngezindlela eziningi siphinde sibonisane kokuningi okuqhubekayo kulo mkhakha. Ngithanda nokubonga iKwaZulu-Natal ngokuthi ikwazi ukusisingatha nokweseka le nkomfa,” esho.
UBrunegard ube eseveza ukuthi usebeka phansi izintambo njengoMengameli wale nhlangano.
UNgqongqoshe wezokuXhumana kwamaZwe, uMaite Nkoane-Mashabane, wamukele izethameli, naye wadlula kweyokuthi kungani engabonakali uZuma kule nkomfa.
“UMengameli ubezimisele kakhulu ukuba lapha, kepha kwangahamba ngokohlelo njengoba sazi sonke ngesimo sezulu esiqhubekayo eKapa nesesidlule nemiphefumulo yabantu ababalelwa kwabayishumi,” esho.
“Ngimele uMengameli wethu, uhulumeni kanye nomasipala siyanamukela nonke ekhaya. INingizimu Afrika iyikhaya lezintatheli ezisebenza ngokukhululeka.”
Uphethe ngokuthi luselude ukhalo malunga nokukhululeka kwabezindaba.
UNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho nezokuVakasha KwaZulu-Natal, ophinde abe yibamba likaNdunankulu, uSihle Zikalala, uthe beyizwe bayakwazi ukubaluleka kokusebenza ngokukhululeka kwabezindaba ngokuhambisana nentando yabantu.
“Ngaphandle kwabezindaba kanye nezinkundla zokuxhumana, abantu ngeke baluthole ulwazi ngokuqhubekayo emhlabeni futhi ngeke bakwazi ukuba yingxenye yezinhlelo eziqhubekayo ezweni,” esho.
Ukhulume kabanzi ngomkhakha wezindaba waze wabalula nokuthi kubalulekile ukuthi ezikoleni zobuntatheli kufundwe ngokucwasana ngokwebala okukhona kulo mkhakha.
Le nkomfa, okusuke kuboshelwe kuyo ikakhulukazi labo asebemnkantshubomvu kwezobuntatheli kanye nokunye okuxhumene nomkhakha wezindaba, iqale ngegiya eliphezulu eThekwini ngoLwesithathu njengoba izodonsa kuze kube uLwesihlanu.
KZN acting premier Sihle Zikalala: #WNC17 in Durban for 2nd time in 10 years testament to SA's strong media freedom pic.twitter.com/lw2YVnvy7D
— Ferial Haffajee (@ferialhaffajee) June 7, 2017